I-CASA MYSA - Ikhaya lihlangana nehhotela
Costa di Mezzate, Lombardia, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Alice
I-Casa Mysa iyi-mini-Loft enkabeni yomlando yeCosta di Mezzate, enye yamadolobhana amadala esifundazweni saseBergamo, ephethwe yiCamozzi-Vertova Castle.
Ifulethi litholakala ku-13km ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Orio al Serio kanye ne-13km ukusuka edolobheni laseBergamo, futhi elitholakala kalula ngezithuthi zomphakathi. Isiteshi sesitimela saseGorlago-Montello siqhele ngamakhilomitha angu-1.5. Isanda kulungiswa, inendawo yokulala, ikhishi, indawo yokuphumula kanye nendlu yokugezela yangasese. I-fiber Wi-Fi yamahhala nokuxhumeka kwe-Netflix.
I-Casa Mysa iyindawo enethezekile nephumulele, lapho ungajabulela khona inkomishi yetiye ngenkathi ufunda incwadi. Nethezeka ulalele umculo othile, bukela imuvi emnandi ngaphambi kokulala.
Hlela uhambo lokuvakashela idolobha noma ukusebenza kuphrojekthi.
Usayizi wendlovukazi umbhede wenkumbulo (kufakwe amashidi nezingubo zokulala) Ikhishi elifakwe yonke into oyidingayo: i-microwave, ifriji, iketela, umshini wekhofi. Itiye, ama-waffles namabhisikidi ayatholakala kubavakashi.
Igumbi lokugezela elinezipontshi kanye nesethi yezilokotho, indawo yokomisa izinwele.
Ukuxhumeka kwe-inthanethi okusheshayo ne-Netflix.
Ngamafuphi, akukho lutho olulahlekile .. futhi uma kukhona okushodayo, usazise!
4.94(157 okushiwo abanye)
Kuyasikisela ukuhamba emigwaqweni yedolobhana elinomlando. Imicimbi eyahlukene ihlelwa unyaka wonke. Lokhu kufaka phakathi imakethe yezinto zakudala njalo ngeSonto lokuqala enyangeni, e-La Cascina Fuì kanye noMkhosi Wabaculi Basemgwaqweni, ekupheleni kuka-April, ogcwalisa yonke imigwaqo yase-Borgo ngemibala nangobuciko. Kusukela ngoJuni kuya kuSepthemba epulazini likaFuì, imikhosi ihlelwa, eyaziwa ngekhwalithi yesipho sokupheka.
Ezindaweni ezizungezile ungakwazi ukuqwala izintaba, kunenkundla yethenisi, inkundla yegalofu eqhele ngamakhilomitha ambalwa.
Emamitha ambalwa ukusuka efulethini kukhona imakethe encane, indawo yokucima ukoma yomlando ngaphakathi kombhoshongo wasendulo, i-trattoria ..
Ngamafuphi, indawo enamasu enakho konke ukunethezeka.
Isikhathi sokungena / sokuphuma
Noma ngezinye izidingo.
Inombolo yepholisi: 016084-CIM-00002